Computers & Technology » အင်တာနက် (မရှိမှ) ဆော့လို့ရမယ့် Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း	10
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… သိရတာကျေးဇူးတင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
Alincho says: စမ်းကြည့်ဦးမှ
Alinsett @ Maung Thura says: ဂီမ်းချစ်သူတို့ စမ်းကြအုန်းမယ့်သဘောာရှိ
အောင် မိုးသူ says: မိုက်တယ် ဆော့ကြည့်ဦးမှပဲ။ Chrome ကိုတော့ ပထမပေါ်ကစက သုံးပြီး အခုတော့လက်လွှတ်လိုက်တာ ကြာပြီ။ သူက မော်ဇီလာထက် ပိုလေးလေးလာလို့။
Myanmar Web Designer says: အမှန်က Firefox က ပိုလေးတာဗျ၊ ဒါပေမယ့် သုံးတာကြာလာရင်တော့ သုံးပြီးသားတွေ မှတ်ထားရလို့ browser တိုင်း လေးကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို သုံးတာချင်းတူရင်တောင် Chrome က ပိုပေါ့တယ်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ Chrome သုံးရင် Bookmark တွေ၊ History တွေကို Sync လုပ်တာတွေကလည်း Google နဲ့လုပ်တာဆိုတော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်။ နောက်မှ အဲဒီ Sync လုပ်တာလေးတွေပါ တင်ဦးမယ်ဗျို့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မိုက်၏ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ဒီလိုတွေလဲရှိတာပဲကိုး
naywoon ni says: ၁၀၀ ကို မ​ကျော်​ပါဘူးဗျာ !
Ma Ma says: ၅၀၀ ကျော်တယ်ဆို ကြွားတယ်လို့ ထင်မှာလားးးးး အရုပ်က ငြိမ်ပြီး ဆူးပင်တွေက သွားနေလို့ မျက်စေ့လည်နေတာကို အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနဲ့ အရုပ်ရဲ့ အရှေ့ အနေတော် နေရာမှာ casor (စာလုံးပေါင်းမှန်ရဲ့လားတော့ မသိဘူး။ စာရေးဖို့ နေရာချတဲ့ မှိတ်တုတ်မှတ်တုတ်နဲ့မျဉ်းကို ပြောတာ) ထားပြီး ဆူးပင်က အဲဒီနေရာကို ရောက်ရင် ခုန်လိုက်တယ်။
ပြောမယ့်သာပြောရတယ် လူကပါ လိုက်ခုန်နေမိတာလည်း ရှိသေးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 78
Myanmar Web Designer says: ကြွားတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူးဗျာ၊ သူများတွေဘယ်လိုဆော့လည်းတော့မသိဘူး အင်တာနက်မှာ High score ရှာကြည့်လိုက်တာ။ ၂ ထောင်နဲ့ ၄ထောင်ကြားတွေ အများကြီးပဲဗျ :O
ဒါနဲ့ cursor လို့ပေါင်းတာဗျ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.